“कांग्रेसलाई कसैले हराउन सक्दैन , यदी कांग्रेस हार्छ भने कांग्रेसको कारणले हो ” स्वर्गिय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भाषण गर्ने कुनै पनि चुनाबी सभामा यो वाक्य छुट्दैनथ्यो । अहिलेपनि कांग्रेस यही समस्याबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा जहाजहा कांग्रेसले पराजय भोग्यो अधिकांश ठाँउमा अन्तरघातको सवाल उठिरहेको छ । अझ धेरै केन्द्रियस्तरको नेताहरु भएको जिल्ला नुवाकोटमा त यतिवेला अन्तरघातको विषय सार्है पेचिलो बनेको छ । प्रकृतिक नियम नै हो आफ्नो कमजोरीले भन्दापनि अरुलाई दोष लगाउदै आनन्द मान्ने । स्थानीय निर्वाचनमा पराजित कांग्रेसका उमेद्वारहरु यतिवेला अन्तरघात भएको भन्दै जिल्लादेखी केन्द्रसम्म हारगुहारमा छन् । कोहीसँगपनि असहयोग गरेको कुनै प्रमाण छैन केबल आफु विरुद्ध यो हो की भन्ने शंकाको भरमा नाम पोल्दै पाटीको आन्तरिक गतिरोधलाई छताछुल्ल पार्न अभ्यस्त छन् । स्थानीय निर्वाचन र अन्तरघातको रोइलो संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा नुवाकोटको तिनवटै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गर्यो । भने समानुपातिकमा दुई जना अन्य सांसदपनि मनोनित भएसँगै नुवाकोट कांग्रेसको तर्फबाट अहिलेपनि व्यवस्थापिका संसदमा पाँच जना संसदको प्रतिनिधित्व रहेको छ । जसमा अर्जुन नरसिंह केसी, डा.रामशरण महत, डा. प्रकासशरण महत , बहादुरसिंह लामा र जनदिश्वर नरसिंह केसी रहेका छन् । यि पाँच नेताको आआफ्नै किसिमको वर्चश्व जिल्लामा रहेको छ । २० वर्षपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा हरेक नेताले आफु नजिककालाई टिकट दिनखोज्नु स्वभाविक थियो र हो पनि । तर यत्तिसम्म पनि भयो कि एउटाले आधिकारिक भनेर उमेद्वारी दर्ता गराइसकेपछि पुन पाटी केन्द्रिय सभापतिको हस्ताक्षरको टिकट ल्याएको भन्दै अर्को उमेद्वारी दर्ता भई त्यसैले आधिकारिकता पाउने परिस्थिती बन्यो । त्यसपछि विभिन्न ठाँउमा भएको चुनाबी सभामा नेताहरु भएर भोट माग्ने र आन्तरिक किचलो अन्त्य भएको उद्घोषपनि भयो । जहाँ जहाँ कांग्रेसले विषय हासिल गर्यो त्यहा अन्तरघातको रोइलो सुनिन्न भने जहाँ जहाँ कांग्रेसले पराजय भोग्यो त्यहात्यहा अन्तरघात भएको भन्दै आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ । जसले चुनाबी खर्च भन्दै केही रकम दिए र फिल्डमा पाटीको विरुद्धमा नै गतिविधी गरे तिनको अन्तरघातमा लिस्टमा नाम छैन । जोसँग उमेद्वार बनेकाको केही दुश्मती थियो अधिकांश अन्तरघात गर्नेको लिस्टपनि त्यस्तै किसिमको छ ।
तिनवटै क्षेत्रमा विजय हासिल गर्दा उही नेतृत्व सफल अहिले उही अन्तरघाती ! संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा तिटवटै क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसले विजय हासिल गर्दा नेपाली कांग्रेस नुवाकोटको सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसी थिए । र अहिलेपनि उनै केसी कांग्रेसको जिल्ला सभापति छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन हारेर चर्चामा रहेको बेलकोटगढी नगरपालिका र विदुर नगरपालिका हो । यहाँ कुनै नेताले भन्दापनि स्थानीय तहका कार्यकर्ताबिचको मतभेदलाई उमेद्वार र नेताले व्यवस्थापन गर्न नसक्नु र पराजयको प्रमुख कारण हो । ५० आँै वर्षदेखी पाटीको लागी काम गरेकाहरुले अपेक्षित अवसर नपाउनु नैरास्यताको कारण थियो भने तिनै निराश व्यक्तिहरु तथष्ठ बसिदिँदा जनताको भोटमा यताउता भएको देखिन्छ । भने अर्कोतर्फ टिकट ल्याउनुमै जित र हारको नाटक मञ्चन भइरहदा विजय निम्ति आवश्यक तयारी नै केही क्षेत्रमा नपुगेको अर्को यथार्थपनि उत्तिकै हो । प्रदेश र केन्द्र निर्वाचनमा पनि आकांक्षी नै धेरै पछिल्लो क्षेत्र निर्धारण अनुसार केन्द्रको लागी नुवाकोटमा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको छ भने प्रदेशको लागी चारवटा निर्वाचन क्षेत्र । केन्द्रिय स्तरका चारजना नेताहरु केन्द्र निर्वाचन लड्ने मनस्थितीमा देखिन्छन् साथै संसद जगदिश्वर नरसिंह केसिको आकांक्षा देखिन्छ । भने प्रदेशमा पनि रमेशकुमार महत, प्रतापसिह लामा, अर्जुन न्यौपाने लगायत धेरै आकांक्षी छन् । प्रत्येकलाई व्यवस्थापन गर्दै विजयको सुनिश्चित आधार तयार कसरी होला यो नै पेचिलो विषय छ ।
आरोपप्रत्यारोपले प्रदेश र केन्द्र निर्वाचनलाई धक्का! नुवाकोट कांग्रेसमा अहिले देखिनेगरि दुईवटा खेमा छ । लाग्न सक्छ संस्थापन र पौडेल पक्ष तर नुवाकोट कांग्रेसको राजनीतिमा अलि फरक अवस्था छ । केसी र महत खेमामा विभाजित नुवाकोट कांग्रेस राजनीति यतिवेलापनि भुसको आगो झै भित्रभित्रै ठूलो द्वन्दमा छ । खेमाको हिसाबले डाक्टर रामशरण महत पौडेल खोमामा छन् भने अन्य सबै नेता देउवा क्याम्पमा नै छन् । हरेक समय केसी खेमाको नुवाकोट काग्रेसमा वर्चश्व रहदै आएको थियो । तर गएको महाधिवेशनपछि भने केसी खेमा अली कमजोरजस्तो देखिएको छ । त्यो पनि महत खेमा बलियो भएर होइन नुवाकोट कांग्रेसमा बहादुरसिंह लामाको उदय । लामाले महत खेमालाई समर्थन गर्ने र केही नुवाकोट कांग्रेसको विवादमा देउवाले प्रकाशशरण महतको समर्थन लिइदिदा केसी खेमाको अली कमजोर हो की जस्तो देखिन्छ ।